Pyae Phyo (MMiTD): ♪ 9000ကျပ် (၀န်းကျင်) ရှိတဲ့ ဂျပန်တံဆိပ် Power Bank - " Maxell Mobile Charger " (Model No. MPC-B2800mAh) ♫
♪ 9000ကျပ် (၀န်းကျင်) ရှိတဲ့ ဂျပန်တံဆိပ် Power Bank - " Maxell Mobile Charger " (Model No. MPC-B2800mAh) ♫
Maxell (Japan) တံဆိပ် ခရီးဆောင်မိုဘိုင်းအားသွင်းစက်များကို Smart Phone များကဲ့သို့ အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ iPad / iPhone / iPod / Smart Phone / Tablet များကို နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ဗို့အားပမာဏ 1800mAh အထိ သိုလှောင်နိုင်၍4နာရီကြာ အားသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အ၀င်အထွက်ပါရှိတဲ့အတွက် သိုလှောင်မှုပမာဏကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ Lithiumion ဘက်ထရီကို သုံးထားသောကြောင့် အကြိမ်အနည်းဆုံး 500 အထိ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ 11mm အထူသာရှိပြီး ကိုယ်ထည်ကို ခိုင်မာတဲ့ အလူမီနီယံများနှင့် ပြုလုပ်ထားတယ်။
ပန်းရောင်၊ ငွေမှင်ရောင်တို့ဖြင့် လှပစွာထုတ်လုပ်ထားပြီး အာမခံတစ်နှစ်ပါ၍ Multi World Electronics မှ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လက်လီလက်ကားဖြန့်ချိပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းအရောင်းဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Multi World Electronics, Ph : 01-374188, 389688, 387908